မလှိုင်မြို့ မြို့ မ အားကစားကွင်း အထူးတန်း ပွဲကြည့်စင် တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်း ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းေ?? - Yangon Media Group
မလှိုင်မြို့ မြို့ မ အားကစားကွင်း အထူးတန်း ပွဲကြည့်စင် တည်ဆောက်မှု လုပ်ငန်း ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းေ??
မလှိုင်၊ ဇန်နဝါရီ ၇
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မလှိုင်မြို့နယ် မြို့မအား ကစားကွင်းအတွင်းရှိ အထူးတန်း ပွဲကြည့်စင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းမှာ ယခုအခါ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်း ကျော်ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း မလှိုင် မြို့နယ် အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန လက်ထောက်ဦးစီးမှူး ဦးဝင်းနိုင်ထံမှသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ အုတ်စီလုပ်ငန်းတွေ နောက်တစ်ပတ်လောက်ဆိုပြီးစီးပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ ၂ဝ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်က စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့တာပါ။ အခုဆောက်လုပ်ရေးကို အဆက်မပြတ်လုပ်လာတာ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော် ပြီးစီးနေပါပြီ”ဟု အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်တည် ဆောက်နေသော AT အားသစ်မန္တလေးကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ခံအင်ဂျင်နီယာ ဦးသက်ဆွေဦးက ပြောကြားသည်။
မလှိုင်မြို့နယ် မြို့မအား ကစားကွင်းအတွင်းတည်ရှိသည့် ယခင်ပွဲကြည့်စင်သည် ပေ(၄ဝ x ၂ဝ)ခန့်မျှသာကျယ်ဝန်းပြီး လူ ဦးရေအနည်းငယ်သာဝင်ဆံ့ခြင်း ကြောင့် ပွဲကြည့်စင်ဟောင်းကို ဖယ်ရှားပြီး ပေ(၁ဝဝ x ၂၅ x ၁၈) ရှိသော သံကူကွန်ကရစ်အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်အဖြစ် တည် ဆောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သံကူကွန်ကရစ် ပွဲကြည့်စင် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို မန္တ လေးတိုင်းဒေသကြီး အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှ တိုင်း ဒေသကြီးရန်ပုံငွေ ကျပ် ၇၁ ဒသမ ၂၅ သန်းဖြင့် တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် AT အားသစ်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူတည် ဆောက်နေခြင်းဖြစ် ကြောင်းသိရသည်။
ပြည်ပသို့ ခိုးထုတ်ရန် သယ်ဆောင်စဉ် ဖမ်းမိခဲ့သော သင်းခွေချပ်များနှင့် ရေချိုလိပ်များကို တု??
ကျိုက်ထီးရိုး ကေဘယ်ကား ဖွင့်လှစ်သည့် ၁၃ ရက်အတွင်း စီးနင်းသူ ၆၂ဝဝဝ ကျော် ရှိဟုဆို
ဂရင်းလန်းကျွန်းကိုဝယ်ယူမည့် အမေရိကန်သမ္မတထရန့်၏အကြံသည် အဓိပ္ပာယ်မရှိကြောင်း ဒိန်းမတ်ဝန်ကြီးချုပ်ဆို
လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ အစိုးရလုပ်ငန်း ရပ်ဆိုင်းရန် သမ္မတ ထရန့် ခြိမ်းခြောက်
လူကုန်ကူးခံ လုပ်သားများကို လိင်ဖျော်ဖြေရေး လုပ်ငန်းများသို့ပါ ထပ်ဆင့်ရောင်းချနေကြောင်းေ?
အကြီးစားမဟုတ်ဘဲ အသေးစားရေကာတာများ တည်ဆောက်သင့်သည်ဆိုသော ယူဆချက်မမှန်ကြောင်း တရုတ်သံအမတ်??